Luis Suarez oo ku tilmaamay taageerayaasha Liverpool inay yihiin kuwa ugu fiican adduunka & sababta dhabta ah ee ka dambeysa – Gool FM
Dajiye January 21, 2020
(Liverpool) 21 Jan 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Luis Suarez ayaa ku tilmaamay taageerayaasha Liverpool inay yihiin kuwa ugu fiican adduunka, wuxuuna sidoo kale ka hadlay sababta ay uga sarreeyaan kuwa kale.
Weeraryahanka reer Uruguay ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ay aadka u jeclaayeen taageerayaasha Liverpool mudadii saddexda sano aheyd ee uu joogay garoonka Anfield.
Luis Suarez ayaa 69 gool ka dhaliyay horyaalka Premier League mudadii uu ku sugnaa kooxda Liverpool, kahor inta uusan ku biirin naadiga Barcelona, kaddib markii ay ku lumiyeen koobka horyaalka Premier League dhibco aad u yar xilli ciyaareedkii 2013/2014.
32 jirkan ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay taageerida uu ka helay taageerayaasha garoonka Anfield, tan iyo markii uu kaga biiray horyaalka La Liga ee dalka Spain, wuxuuna ammaan joogta ah ka helay qof walba.
Luis Suarez ayaa wareysi gaar ah uu ku bixiyay shabakada “Liverpool Echo” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Waa kuwa ugu fiican adduunka, sababtoo ah waxay ka mid yihiin taageerayaasha ugu fiican kubadda cagta, sababa la xiriira dhamaan jaceylka ay i siiyeen xilli kasta intii aan joogay Liverpool”.
Intaas kaddib Luis Suarez ayaa wuxuu ka hadlay xiriirka kala dhexeeyay taageerayaasha kooxda Liverpool wuxuuna yiri:
“Had iyo jeer way i jeclaayeen waxayna iila dhaqmeen si wanaagsan, waana sababtaas waxa ay uga mid yihiin taageerayaasha ugu fiican kubadda cagta adduunka, aniga ahaan waa kuwa ugu fiican”.